सिल्टल: ग्रीसआर - एक प्रभावकारी Chrome एक्सटेन्सन प्लेटफार्म
Grepsr एक अद्भुत र सरल वेब निष्कर्षण प्लेटफार्म हो, जहां प्रयोगकर्ताहरु लाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्न सक्छन् नेट बाट डेटा. यो गैर-टेक्नोलोजी प्रयोगकर्ताहरूमा फोकस हुन्छ जुन उनीहरूको डेटा एकत्रित र राम्रो तरिकाले संरचित तरिकामा व्यवस्थित गर्न एक प्रीमियम तिर्न इच्छुक छन्।. यो वेब निष्कर्षण उपकरण यसको प्रयोगकर्ताहरु को लागि निम्न फायदे प्रदान गर्दछ:
बचत समय र ऊर्जा
प्रयोगकर्ताहरु को जटिल उपयोग को लागी बिना विभिन्न वेब पृष्ठहरु बाट धेरै डेटा निकाल सकते हो। सफ्टवेयर उपकरणहरू. तिनीहरू केवल क्यालेन्डरहरू कार्यहरू स्क्रैप गर्न नियमित आधारमा अनुसूचित गर्न पर्दछ. यो एक सरल स्क्रैपिंग सफ्टवेयर कार्यक्रम प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेसको साथ टेक्निकल प्रयोगकर्ताहरूको लागि बुझ्न योग्य छ. आज धेरै ग्राहकहरूले आफ्नो कम्पनीका लागि उत्कृष्ट नतिजा उत्पन्न गर्न यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन्. ग्रीप्सरले उनीहरूलाई सही डेटा प्रदान गर्दछन् जब उनीहरूलाई चाहिन्छ.
प्रभावकारी उपकरणहरू र स्वचालित कार्यहरू प्रयोग गर्दछ
Grepsr केहि साँच्चै अद्भुत उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ, साथ साथै ठूलो समर्थन र एकीकरण. फलस्वरूप, यो प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक सजिलो प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ, जसले नेट उपकरणबाट लगभग केहि हटाउन विशेष उपकरणहरू प्रयोग गर्न चाहन्छ. उदाहरणका लागि, यो सफ्टवेयर प्रोग्राम B2B डाटा, जस्तै उत्पादनका मूल्यहरू, स्टकहरूको सूचिहरू, नामहरू, साथसाथै व्यापार सम्पर्कहरू.
प्रयोगकर्ताहरूलाई अद्भुत समर्थन टोलीको साथमा प्रदान गर्नुहोस्
वेब खोजकर्ताहरूका लागि तिनीहरू सँधै सबै डेटा हटाउन सजिलो काम होइन।. उदाहरणका लागि, यदि तिनीहरू वेब पेजहरूबाट निश्चित स्टकको मूल्यहरू इकट्ठा गर्न खोज्छन् र वेबसाइटमा यसको ढाँचामा उपस्थित हुन्छ भने, उनीहरूको निष्कर्षण सेटअप पुन: प्रयत्न आवश्यक पर्दछ।. यो एक नौकरी हो कि कुनै अतिरिक्त पैसा संग Grespr विशेषज्ञहरु द्वारा गरिन सक्छ.
यो स्क्रैपिंग सफ्टवेयर कार्यक्रम को उपयोग गर्दछ
बजार मा धेरै कम्पनीहरु को लागी छ कि उनको वेब डेटा को खोज र व्यवस्थित को आवश्यकता हो, जस्तै ठूलो एजेंसियों र खुदरा विक्रेताओं. तिनीहरू दुबै प्रायजसो प्रतिस्पर्धात्मक डेटा चाहिन्छ र ग्रीसका विशेषज्ञहरूले तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छन्. साथै, साना फर्महरूले पनि स्वचालित रूपमा वेबबाट डेटा प्रतिलिपि र पेस्ट गर्न मद्दत गर्न सक्छ.
Grepsr को साथ परियोजनाहरु बनाएँ
जब प्रयोगकर्ताहरु लाई एक निश्चित परियोजना बनाइन्छ, यो सफ्टवेयर प्लेटफार्म उनलाई विश्लेषण गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरु लाई एक विशेष बोली (मूल्य). एकपटक मूल्य सेटअप भएपछि एक डेटा एक्सटेक्टर सिर्जना गरिन्छ, र डेटा संग्रह प्रक्रिया सुरु हुन्छ. वेब खोजीकर्ताहरूले ग्रीसका प्रोफेसरहरू अनुप्रयोग सूचनाहरू वा इमेलहरू मार्फत सूचित गरिन्छन्.
यो सफ्टवेयर निष्कर्षण प्लेटफर्म ग्रेड ईन्क्रिप्सन प्रयोग गर्दछ, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू निश्चित हुन सक्दछ कि उनीहरूको सबै जानकारी सुरक्षित छ. यसबाहेक, तिनीहरू जान्नुपर्छ कि कुनै पनि समय उनीहरूले चाहन्छन्, उनीहरूको डेटाको पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्छ Source .